Imidlalo ye-10 yebhola ekhatywayo / yebhola ekhatywayo ye-android kunye ne-ios
Eyona Iindaba Kunye Nokuphononongwa I-10 yeyona midlalo yebhola ekhatywayo / yebhola ekhatywayo ye-Android kunye ne-iOS
Amaxesha ebhola ekhatywayo kwihlabathi liphela abanjwa kanye njengokuba iintshatsheli kwiligi nganye bezizakuzimisela kwaye asishiywanga nto ngaphandle kokubukela umdlalo wempinda. Ewe, siza kukubeka kwakhona kwisenzo, kodwa ngeli xesha njengomdlali! Ewe kunjalo, kukhuseleko lwekhaya lakho kunye ne-smartphone yakho esandleni.
Ayisiyo yonke le midlalo emalunga nemizobo yokwenyani kunye namaqela anelayisensi, kodwa konke malunga nokuzisa amava ebhola ekhatywayo ngandlela thile. Masitsibe ngqo!
I-Stickman Soccer 3D
Siza kuqala ngento encinci kunye ne-arcade engaphezulu: I-Stickman Soccer. Njengoko igama libonisa, abadlali kulo mdlalo bonke banamathela kodwa oko akuthethi ukuba abanabo ubuntu! Ungadlala kunye neeklabhu ezivakalayo kwaye ujonge uhlobo oluqhelekileyo kwaye ujonge iimali zomdlalo, ungathenga iinguqulelo zentonga zabadlali abadumileyo. Ukuba awukho kuloo nto, unokwenza iqela lakho kunye nabadlali benze umxube ogqibeleleyo wabadlali beentonga.
Umdlalo weqonga uhamba ngokukhawuleza kwaye ulawulo lulula, lwenza umdlalo ukhawuleze ukuthabatha kwaye wonwabe. Imigangatho kasompempe yento ethathwa njengehlazo iphantsi kakhulu, ukuze ube noburharha ngakumbi kunesiqhelo. Ibhola ekhatywayo ye-Stickman ivumela abadlali abaninzi basekuhlaleni nabalawuli, ke ukuba unayo into yokulala, ngumdlalo omnandi ukudlala nomhlobo okanye mhlawumbi nomntwana wakho.
Ikomityi yebhola ekhatywayo ye-2020 ngumdlalo onemizobo yokwenyani kunye nentshukumo yomdlali kodwa oomatshini bebhola bayinto engaqhelekanga ngamanye amaxesha, ibhola ngamanye amaxesha inamathela kwiinyawo zabadlali okanye iiglavu zikanozinti njengemagnethi. Ngokubanzi, lo mdlalo kunokuba nzima ukuwulawula. Kukho isifundo esibanzi sokukunceda, nangona kunjalo, abaphuhlisi kubonakala ngathi bayisebenzisa njengendlela yokwenza ukuba ubukele iintengiso ngaphambi kokuba udlale umdlalo wokwenyani, ke kufuneka umonde.
Akukho badlali kunye namaqela anelayisensi kwaye zilungiselele ukujongana noMassi kunye neRonalde kunye namaqela abo evenkile. Ayisiyonto inkulu kakhulu ukusukela emva kwexesha ungayiboni kwaphela. I-twist eyahlukileyo kumdlalo webhola ekhatywayo yimiceli mngeni onokuyigqiba, enje nge 'Umgangatho yi lava'. Kuninzi ukwenza kwindebe yebhola ekhatywayo ye-2020, kunjalo!
Inqaku! IHero isusa iindawo ezikruqulayo zebhola ekhatywayo kwaye endaweni yoko ikubeka ngokufanelekileyo kwiimeko ezibaluleke kakhulu: ukufumana amanqaku. Umdlalo ubonelela ngemiceli mngeni engaphezu kwama-700! Ukusuka kwiikona ukuya kwindibaniselwano ekhubekisayo egcweleyo, uya kubekwa kwizikhundla ezahlukileyo ukusuka kwinto encinci ukuya phantse ayinakwenzeka. Yintoni enhle ngalo mdlalo kukuba ukuchaneka kwemidlalo yakho kukubonisa ngokuthe ngqo kwegalelo lakho. Xa ulawula ukugoba ibhola edlulileyo kwezokhuselo kwaye ugqibe ngevolley kwikona, kuyanelisa kakhulu. Ngapha koko, umdlalo ojika-jika ngothetha ukuba awunyanzelekanga ukuba unamathele kwiscreen se-smartphone sakho kangangemizuzu njengoko usenza nemidlalo yexesha-lokwenyani ngokuchasene nabachasi babantu. Musa ukuphazamiseka kakhulu, nangona kunjalo, ukuba uphoswa ngamathuba amaninzi kuya kufuneka ubukele ezinye iintengiso ukuze ufumane amandla.
Kukho ibali elilula elisonga imiceli mngeni eyahlukileyo kwiphulo elinye lokuqhubela phambili kodwa uya kuyityeshela uninzi lwento eyenzekayo phakathi kwezigaba.
Umdlalo webhola ekhatywayo weFIFA ngumdlalo wokuqala oza engqondweni xa wabona isihloko seli nqaku. Inesibonelelo sokuba nabo bonke abadlali bokwenyani kunye namaqela, akukho magama angachanekanga apha! Nangona kunjalo, i-EA inyanzelise izinto kancinane kakhulu kwicala lokuthengisa lezinto ezenza ukuba kubonakale ngathi umdlalo ujikeleza ikakhulu ekuvulekeni kweepakethe nasekufumaneni abadlali abangcono.
Kungenxa yokuba indawo enkulu yebhola ekhatywayo yeFIFA yinto ebizwa ngokuba yi 'VS attack' mode apho ufumana khona ukudlala ukuhlaselwa okwahlukileyo kwaye uzame ukufumana amanqaku ngelixa umchasi wakho esenza okufanayo eyedwa. Ngcono iqela, ngokulula iimeko ozibeke kuzo, kulungele ukuphumelela. Oku kwenza ukuba nabadlali abanezibalo ezilungileyo kubaluleke kakhulu.
Kwaye ngelixa imizobo ilungile kwaye umdlalo ubonakala unomdla, le ndlela yokudlala ayonwabisi ngaphandle kokuba uzimisele ukuchitha imali ethile kwiipakethi zomdlali.
Libala amabala emidlalo adumileyo kunye nabadlali beenkwenkwezi, Ibhola ekhatywayo ikubuyisela kwindawo yokudlala apho ungabonisa khona ibhola.
Kwibhola ekhatywayo egqithisileyo, udlala umdlalo okhawulezayo apho ulawula umdlali omnye kuphela kwaye abanye balawulwa ngumdlalo we-AI kumdlalo, okanye ngcono okwangoku, abahlobo bakho kunye nabachasi abathile abangahleliyo inkqubo yomdlalo oyikhethele wena. Unokukhetha phakathi kwe-1 vs 1, 2 vs 2 okanye 3 vs 3, ke awudingi ukuba abanye abantu bonwabele umdlalo.
Akukho mithetho mininzi ekufuneka ukhathazekile ngayo, yenza ibhola ibuyele emva komnatha! Ewe kunjalo, kufuneka wenze ngokwezifiso umlinganiswa wakho kwaye ujonge ngendlela ofuna ukumelwa ngayo ebaleni. Ukuba ukwimidlalo yezemidlalo yasesitratweni, ngokuqinisekileyo uya kuyonwabela ibhola ekhatywayo.
Iphupha leBhola ekhatywayo ye2020
Nge-Soccer League yebhola ekhatywayo sibuyele kwindlela yesiko ngakumbi kwibhola ekhatywayo. Umdlalo uquka ininzi yabadlali abanamaphepha-mvume, ukuba oko kubalulekile kuwe kwaye imizobo iyanelisa. Iintshukumo zinamanzi kwaye ziyinyani, zikuvumela ukuba wenze iintshukumo ezintle kunye nokugqibezela kugwayimbo xa ufumana ukuxhonywa kwalo. Zonke ezo zinto ziya kuhamba kunye nenkcazo elungileyo.
Umdlalo ukuvumela ukuba ungene ezihlangwini kungekuphela nje kubadlali bebhola ekhatywayo kodwa ungumnini weqela lebhola ekhatywayo. Uza kuthatha isigqibo sokuba uphucule kwaye wandise isiseko seqela, isigqibo ngasinye sinika iqela lakho izibonelelo ezongezelelweyo.
I-Soccer League yebhola yebhola ekhatywayo sisihloko esigqwesileyo sokuzama ukuba uyadikwa yimidlalo ethandwayo yoluhlobo.
Umdlalo webhola ekhatywayo ngomnye umdlalo okubeka ngqo kubushushu bomzuzwana. Kuyo, uya kujongana nomnye umdlali weentlobo zabantu nokuba kukukhatyelwa isohlwayo okanye ukujolisa ekujoliseni ngexesha. Akusondelanga kumava okwenene ebhola ekhatywayo njengeminye imidlalo kodwa ibandakanyeka kakhulu kwaye iyonwabisa. Kumdlalo ngamnye, kuya kufuneka uhlawule umrhumo usebenzisa imali yomdlalo ongaphakathi egalela echibini lamabhaso ukuba uphumelele, ungadlala de ibhetri yakho ife. Ngokuphumelela ufumana iipakethi ezimile kwingxowa yokuzivocavoca kwaye ziqulathe zonke iintlobo zezinto ezintle, ukusuka kwiinwele ezintsha ukuya kwiibhola eziza kuphucula amandla akho kunye nokuchaneka.
Umdlalo webhola ekhatywayo ngumdlalo omnandi wokubulala imizuzu embalwa yexesha lokuphumla kunye nomjikelo okhawulezayo wezohlwayo. Isenokungavakali ngathi kumnandi kakhulu, kodwa ungothuka!
Inkwenkwezi yebhola ekhatywayo ye2020 yeligi ephezulu
Umdlalo weqonga webhola ekhatywayo we-2020 uyafana neStrike Hero. Uza kuthatha isigqibo seziphumo zeemeko ezahlukeneyo ngokuswayipha kwiscreen sakho ukuze ujolise ibhola. Nangona kunjalo, kwimeko yenkwenkwezi yebhola ekhatywayo, ukuba awufumani siphumo sinqwenelekayo, umdlalo uyaqhubeka nokuhlomla ngokubhaliweyo kude kube lixesha elizayo xa kufuneka igalelo lakho. Oku kukunika ithuba lokuzikhulula kamva kumdlalo ukuba imidlalo yakho yokuqala ibiyinto ebambekayo. Okwangoku awukho kulawulo oluninzi njengoko ubuya kwenza neminye imidlalo, kodwa ukuba uhlala unesithukuthezi ngokubaleka ujikeleza uzibuza ukuba ingaba uyayidlulisa na ibhola okanye hayi ke umdlali webhola ekhatywayo we-2020 ulungile.
Iintshatsheli zeMidlalo yeyona nto ilandelayo ukuba ufuna elinye lamagama amakhulu kwimidlalo yebhola ekhatywayo. Umdlalo ubonakala ulungile kwaye unolawulo oluchanekileyo ukuze wenze umdlalo olungileyo kuzo zonke iimeko. Ufumana ukubona amagama abadlali aqhelekileyo, ungalindeli nje ubukhazikhazi kunye nobukhulu beFIFA. Lo mdlalo ungakumbi malunga namava ebaleni kunaleyo ungayinikanga phakathi kwemidlalo. Oko akuthethi ukuba akufuneki ukuba uzame ukudibanisa elona qela libalaseleyo, kunjalo. Njengakweminye imidlalo, abadlali abangcono baya kuphucula amathuba akho okufumana umhlaba kwikona ephezulu yokudubula ukusuka kwikona engenakwenzeka kwaye ikukhokelele ekuphumeleleni. Ekupheleni kosuku, nangona kunjalo, ukuba oobhontsi bakho abanabo ubuchule, ngekhe ufumane i-W, ke qalisa ukuziqhelanisa!
Ibhola ekhatywayo ye-PES 2020
Ibhola ekhatywayo yeFIFA kunye ne-PES bezisoloko zisilwa ngesona sithsaba somdlalo webhola ekhatywayo okwexeshana nakwiselfowuni, i-PES yeyona iphumeleleyo. Umdlalo ubonelela ngamava anjengekhonsoli ngokunyakaza komdlali okwenyani, uyilo lwebala lemidlalo kunye nombulelo wombane kwi-Injini ye-Unreal. Uza kudlala nabanye babadlali ababalaseleyo kwaye ude ufumane iMaradona edume kwiqela lakho simahla. Endaweni yeepakethe, nantsi uza kutyikitya abadlali abaza nezinto zabo zethamsanqa.
Ngokubanzi, nangona kunjalo, into ehlawulelweyo yomdlalo incinci kakhulu kunokuba kunjalo kwiFIFA kwaye abadlali bayawonwabela umdlalo ngaphandle kokuhlala befunwa ukuze bachithe imali yokwenyani kuwo. Ukuba ujonga eyona simulator yebhola ekhatywayo ye-smartphone, i-PES kufuneka ibe lukhetho lwakho lokuqala.
Ewe iadaptha yakho yakudala eyi-18W ibiza i-iPhone 12 ngokukhawuleza kwitshaja entsha ye-20W
Ezona zicwangciso zeefowuni zeselfowuni kubantu abadala abavela kwi-T-Mobile, Verizon naseSprint